बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष चन्द माथि आक्रमण
आक्रमणकारी समूह फरार
डि.आर. भट्ट, बैतडी । बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोरख बहादुर चन्द माथि ढुङगा प्रहार भएको छ । रोडीदेवलदेखि पञ्चेश्वर गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म जोड्ने सडकका विषयमा छलफल गरेर फर्किदै गर्दा बल बहादुर भण्डारी लगायत चार–पाँच जनाको समूहले अध्यक्ष चन्द माथि हातपात गरेको वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष राज बहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयो ।
सडकको विषयमा छलफल गरेर वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष संगै फर्किरहेको बेला एक्कासी आफु माथि हातपात गरेको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोरख बहादुर चन्दको भनाइ छ । अध्यक्ष संगै रहनु भएका वडाध्यक्ष राज बहादुर चन्दका अनुसार सडकका विषयमा छलफल सकेर कुलाउँ फर्कने क्रममा बीच जंगलको बाटोमा अध्यक्ष चन्दमाथि हातपात भएको हो । चार–पाँच जनाको समूह आएर उहाँमाथि लट्ठीले आक्रमण गरेको वडाध्यक्ष चन्दको भनाइ छ । आक्रमणकारीहरुले ढुंगा फ्याकेर समेत आक्रमण गरेको जनाइएको छ ।
अध्यक्ष चन्दमाथि हातपात गर्ने समूह फरार रहेको छ भने घटनाका विषयमा अनुसन्धान भइरहेको र हातपात गर्ने समूहको खोजीकार्य समेत जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । घटना के कति कारणले भयो भन्ने विषयमा बुझ्ने काम भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रहरी नायव उपरीक्षक नेत्रमणी गिरीले बताउनुभयो । केहि दिन यता सडकको विषयमा पनि विवाद थियो भन्ने खालको कुरा सुनिएकोले घटनाको बारेमा थप बुझिरहेको प्रहरीले जनाएको छ । तर पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोरख बहादुर चन्दले सडकका विषयमा कुनै किसिमको विवाद नरहेको दाबी गर्नु भएको छ ।
प्रकाशित मिति: मगलवार, चैत्र १९, २०७५, १०:०४:००
एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन कञ्चनपुरको प्रथम जिल्ला परिषद् तथा शैक्षिक अन्तरक्रिया आइतवार, भदौ १, २०७६ 35